Wasiirka Amniga Jubbaland oo ka badbaaday Qarax lagula eegtay duleedka Doolow – Balcad.com Teyteyleey
By Abdihakin Yousuf	 On Jul 28, 2017
Wafdiga Wasiirka, ayaa waxaa qaraxan lagula eegtay Deegaanka Abow, oo qiyaastii 30KM u jirta Luuq, waxaana la soo sheegaya in mid kamid ah gaadiidkii galbinaysay uu ku burburay qaraxaas.
Wali lama xaqiijin khasaaraha ciidamada ilaalada Janan kasoo gaarey weerarka. Askar gurmad ah oo ka baxday Doolow, ayaa Wasiirka iyo wafdigiisa uga hortagey duleedka degmada, oo markii dambe si nabad ah usoo galbiyay.
Cabdirashiid Janan iyo Wasiirro kala ayaa u jooga gobolka Gedo kiiska dil labo maalmood kahor magaalada Balad Xaawo loogu geestay saddex dhalinyaro ah, oo lagala baxay saldhiga degmadaasi. Al shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyada weerarka Miino.
Mas’uuliyiinta Balad Xaawo, oo ku jiraan Gudoomiyaha degmada, Ku xigeenkiisa, iyo Taliyaha Nabad Sugida, ayaa loo xiray dilkaasi, waxaana lagu hayaa hadda degmada Doolow, oo la filayo in dhawaan Maxkamad lagu soo taago.
Dhalinyarada la dilay, oo ku eedaysnaa tuhuno ah inay katirsan yihiin Al shabaab, ayaa la sheegay in ay toogteen Ciidamada Jubbaland, iyadoo aan Maxkamad xukumin, taasina waxay keentay xiisad dagaal oo mudo labo maalmood ah ka taagan Balad Xaawo.
The post Wasiirka Amniga Jubbaland oo ka badbaaday Qarax lagula eegtay duleedka Doolow appeared first on Ilwareed Online.
bangiga dhexe ee soomaaliya oo shaaca kaqaaday lacag somali cusub in dalka lakeenayo